Kivy: Ebumnuche nke Python na-enye ohere ka ngwa ngwa na-emepe emepe ngwa ngwa | Site na Linux
Zụlite na Eke Ọgba Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma ọtụtụ na-ele ya anya dịka otu n'ime asụsụ mmemme kachasị mfe iji mụta, mana yana asụsụ a ị nwere ike ịme ngwa dị oke ike na njiri akụ dị ala. Ntọt nke ịdị mfe na arụmọrụ ya ji arụ ya n’asụsụ a, ndị ama ama kpuchie maka Eke Ọgba, nke bu ngw’oru nwere otutu ihe eji aru oru nyere programmers aka mma ngwa na obere oge.
Kivy Ọ bụ otu n'ime kpuchie maka Eke Ọgba nke m chọpụtala ka ndị ọkachamara jiri ya dịka ọ bụ ikpo okwu ma nwee nkwado maka ọtụtụ ngwaọrụ ntinye na ogbugba ndu dị taa.
1 Gịnị bụ Kivy?
2 Etu esi etinye Kivy na Linux
3 Mkpebi banyere Kivy
Gịnị bụ Kivy?
Kivy bụ a kpuchie maka Eke Ọgba Mepee oghere na multiplatform nke na-enye ohere iji mepụta ngwa nwere arụmọrụ dị mgbagwoju anya, njirimara onye ọrụ enyi yana ọtụtụ ihe na-emetụ aka, ihe a niile site na ngwa ngwa, na-agbakwunye ngwa ngwa iji nweta ngwa ngwa yana iji rụọ ọrụ nke ọma na-enyere aka ịnwe koodu echegharị ma dị mfe itinye .
Kivy mepụtara site na iji Python y Ihe omimi, ọ dabere na OpenGL ES 2 ma na-akwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ ntinye, n'otu ụzọ ahụ, a kwadebere ngwá ọrụ nnukwu ọbá akwụkwọ nke wijetị nke na-enyere aka ịgbakwunye ọtụtụ arụmọrụ.
Usoro a dị ike na-enye anyị ohere iwepụta koodu isi ntọala nwere ike iji ya na ngwa dabere na Linux, Windows, OS X, Android na iOS. Nzụlite ya magburu onwe ya, nnukwu akwụkwọ, obodo sara mbara, na API dị ike na-eme ka ọ bụrụ usoro bara uru maka ọtụtụ ndị mmemme Python.
Kivy Ọ na-abịa n'ụzọ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe atụ nwere ike ịba uru maka ndị ọrụ novice na ndị ọkachamara, na mgbakwunye, ọ nwere Wiki zuru ezu https://kivy.org/docs/ nke na-ekpuchi isi ihe niile maka ntinye na ojiji nke ngwa ọrụ ahụ.
Etu esi etinye Kivy na Linux
Kivy Ọ nwere installers maka iche iche distros na sistemụ, ị nwere ike nweta ha na ndị na-esonụ njikọ, anyị nwekwara ike inweta ọtụtụ akwụkwọ maka ntinye na nhazi nke Kivy Ebe a.
Mkpebi banyere Kivy
Usoro a dị ike maka Python bụ ezigbo nhọrọ maka ndị novice na ndị ọrụ ọkachamara, ebe o nwere ọrụ na-enye anyị ohere ịgbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ ma nyere anyị aka ime ka usoro mmepe ngwa ngwa.
Echere m na otu n'ime ikike kasịnụ ya bụ nkwado dị elu maka ngwaọrụ ntinye na usoro iwu dị iche iche, yana enwere ike ịmepe ntọala ntọala nke enwere ike ibuga ya na sistemụ arụmọrụ dị iche iche, nke ga-enyere ndị Python mmemme aka ịchekwa oge. ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Ndị otu Kivy development dere na weebụsaịtị ha a gallery nke dechara oru na kpuchie ga-enye aka mee ka anyị nwekwuo nghọta ma a bịa n'ịhụ ikike ahụ ma nye anyị echiche nke ihe anyị nwere ike iji usoro a maka Eke Ọgba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Kivy: Nhazi nke Python nke n’enye gi ohere imepụta ngwa ngwa
Ndewo, amaghị m ma ọ bụrụ na ị bu n'uche zuru ezu kama nke wiki dị mgbagwoju anya 😛
Edemede dị ezigbo mma, kọwara nke ọma.
Edemede mara mma. Ana m achọ ụfọdụ dị mfe iji ngwa mmepe nchekwa data, amaara m na e nwere zillions nke ha na ndị dị ezigbo mma, mana na-eche maka ihe eserese na-enweghị itinye aka na mmemme, ma ọ bụ opekata mpe na Python kachasị elu, dịka, ndụmọdụ ọ bụla? Kivy na-enye echiche nke ịbụ ihe ọmụmụ, amaghị m etu ọ ga-esi akpa agwa na ọdụ data.
Ga-amasị m na-agbalị ya ma a ajụjụ: Gịnị ka m wụnye Python 2 ma ọ bụ 3?. Daalụ.
gPodder: A mfe Podcast ahịa
Pragha Music Player: Ngwa ngwa ngwa mere GTk